DOWNLOAD MP3: Trevor Dongo – Rega Zviende | Afrikmp3
Waenda, waendepiko ×2 Rudo rwaenda rwaendepiko? Yeah, Trevor D Paunocheukawo shure, Dzamisa pfungwa uzvifunge Rudo ruye rwamaipanana pazere vanhu, Rwaenda asi hamuzive, rwaendepiko?
Inga zvaidadisawo wani, Vanhu vachikuyevai wani paya, Saka ndepapiko pamakairasa imi nhai. Aenda asi hauzive aendepiko. Saka rega zviende, Moyo chaunoda rudo chete, Waiti zvichachinja asi kwete. Hazvidi zvetsinga, Kana ariwako achadzoka chete.
Zviri kuita kunge zuro paya, Pamaiita kunge solo na Mutsai, Asi sei zvazodai, chanyanyonetsa chiiko nhai? Rudo rwaenda asi hamuzive, rwaendepiko? Nguva chinhu chakanaka, kuratidza shungu sekuti zvinhu zvinake. Asi pane paunoti ini ndaneta. Rudo chinhu chakanaka, ratidzawo shungu shungu shungu iwe. Kana zvaramba usamanikidze iwe siya. Saka rega zviende, Moyo chaunoda rudo chete. Waiti zvichachinja asi kwete. Hazvidi chitsinga Kana ariwako achadzoka chete.×3 Kana zvaramba iwe siya, zviende Moyo chaunoda rudo chete Waiti zvichachinja seiko, seiko Ooohh, yeaah Inga zvaidadisawo wani Vanhu vachikuyevai wani paya Saka ndepapiko pamakairasa imi nhai Aenda asi hauzive, aendepiko.
Doc Shebeleza – Ebunandini
MsCosmo – 88 ft. Kwesta, Solo, Kid X
Ntukza ft. Fifi Cooper – Say no more
Updated: March 16, 2020 — 7:46 am